The Gardener: 2013-02-03
ပြတင်းပေါက်ရှေ့ကနံရံက ထူသထက်ထူထဲလာနေတယ်။ ဒီနံရံဆီမှာ နည်းနည်းတော့ အလင်းရှိဖို့ကောင်းတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အပ်ဖျားလေးနဲ့တူးဆွလို့ဖြစ်လာမယ့် သေးငယ်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းတဲ့အပ်ပေါက်ရာလေးကနေ သွယ်တန်းလာမယ့် အလင်းတစ်စတစ်လေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ Shawshank Redemption ထဲမှာ Andy Dufresne အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Tim Robbins အတွက်တော့ ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ တူလေးတစ်လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လွတ်မြောက်ဖို့ ဖောက်ထွက်ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ Get busy living, or get busy dying. အမှောင်ထုဟာ ဖောက်ထွက်ဖို့လား၊ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေဖို့လား။
ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်နေတယ်။ ထူထဲတဲ့နံရံနဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ခဲ့ရတာ ကံကောင်းတယ်ဆိုနိုင်ပါ့မလား။ ပင့်ခ်ဖလွိုက်ရဲ့ နံရံဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ နံရံက နောက်ထပ် အုပ်ချပ်လေးတစ်ချပ် (Another brick in the wall) သီချင်းသံကြားနေရတယ်။ နံရံကလား။ အုပ်ချပ်ကလား။ ထင်ယောင်မှားစိတ်ကလား ... တစ်ခုခုက သီချင်းသံ ထွက်နေတာပဲ။ ပညာတတ်ရောဂါနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျွန်ပညာရေးသံလှောင်အိမ်တစ်ခုကို ကန်ဖွင့်သည့်တိုင်အောင် အသိဉာဏ်တရား တစ်စမှထွက်ကျမလာဘူး။ ဒီ သောက်ပြတင်းပေါက်ကို ဒီ သောက်နံရံနားမှာ လာဖောက်ထားတာဟာ သောက်တလွဲ များစွာတွေထဲက တော်တော်လွဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ We don't need no education ....We dont need no thought control ...
နံရံကိုငေးကြည့်ဖို့ဆိုရင် ဒီပြတင်းပေါက်နားမှာ လာနေတာ လွဲမှားခြင်းသက်သက်ပဲ။ KORN ရဲ့ EVOLUTION ကို အသံကုန်ဖွင့်ပြီး ငေါင်စင်းစင်းထိုင်နေမိတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ ပိုးစုန်းကြူးတစ်ကောင်နဲ့အတူ လင်းလိုက်မှောင်လိုက်ဖြစ်နေရတာကိုက အရသာပဲ။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ သွေးပြန်ကြောတစ်ခုရဲ့ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် တဒိတ်ဒိတ် ရာဇဝင်၊ မျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ တံတားပေါ်ကနေ ချောင်းထဲခုန်ချပြီးသေသွားတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မျက်နှာ၊ ကြယ်ကြွေသလို ဖြစ်နေတဲ့စိတ်၊ မရှိတဲ့လူတွေရဲ့ ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ ခြေသံတွေ၊ မျက်ရည်ကျသံသက်သက်နဲ့ခြောက်သွေ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ လေလုံပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးရဲ့ ဖြစ်ပျက်၊ ဒါတွေကလွဲရင် ပြတင်းပေါက်နားမှာ ဘာတစ်ခုမှရှိမနေဘူးလို့ အတိအကျပြောလို့ရနိုင်တယ်။
အမှောင်ထဲမှာတော့ မျက်စိဖွင့်ထားတာနဲ့ပိတ်ထားတာ ဘာမှမထူးဘူး။ ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ထားတာနဲ့ပိတ်ထားတာနဲ့မကွာရင် မွန်းကြပ်မှုဟာ အတူတူပဲ။ Whitney Houston က Amazing Grace ဆိုနေတယ်။ ဒီစီဒီကို ဘယ်သူကူးပေးသွားပါလိမ့်၊ ပြန်စဉ်းစားတယ်။ စဉ်းစားမရဘူး။ ဘာသီချင်းတွေကူးထားလဲဆိုတာလည်း စဉ်းစားမရဘူး။ စီဒီကို အမှတ်တရပစ္စည်းတွေ သိမ်းထားတဲ့ခြင်းတောင်းလေးထဲက ပြန်ရှာတွေ့တာပဲ။ အမှတ်တရ လူတစ်ယာက်ယောက် ပေးသွားတာဖြစ်မယ်။ ရင်ဘတ်ထဲငုံ့ကြည့်လို့မှ နာမည်ပေါ်မလာရင် လူစိမ်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ဘယ်သူပြောသွားမှန်းမသိတဲ့ ဆိုရိုးအတိုင်းသာဆို လူစိမ်းတစ်ယောက် ပေးခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။
LOUIS ARMSTRONG.ရဲ့ အသံဝါကြီးနဲ့ ဆိုထားတဲ့ Whatawonderful world သီချင်းက ပြတင်းပေါက်ကနေထွက်လို့မရလို့ထင်တယ်။ နားထဲကနေတစ်ဆင့် စိတ်ထဲကို ခုန်ချနေတယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ဆင်ခြေလျှောက လိမ့်ဆင်းနေတုန်း တစ်ယောက်ယောက်က သိပ်အံ့သြဝမ်းသာစရာကမ္ဘာကြီးမှာ မင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုပြီး လာပြောရင် နားရင်းကြီးပဲ ဆယ့်ခြောက်ချက်လောက်ရိုက်မိမလားမသိဘူး။
The Platters ရဲ့ The Great Pretender သီချင်းက ဆက်တိုက်ထွက်လာတယ်။ ဒီသီချင်းတွေကို ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တာလား။ ကျွန်တော့်ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူကြိုက်ခဲ့တာလား မမှတ်မိဘူး။ မမှတ်မိတာကို ဘယ်လိုမှမနေဘူး။ သတိရစရာမလိုလို့ မေ့သွားတဲ့ကိစ္စမှာ အမှားတွေ အမှန်တွေပေးနေရအောင် စာစစ်သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ Pretending that you're still around ဆိုတဲ့အပိုဒ်နားရောက်တော့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကနေ မျက်ရည်တစ်ပေါက်ကျလာတယ်။ သောက်ဂွပဲ။ မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေပိုလျှံနေလို့ဖြစ်မယ်။
Paul Anka ရဲ့ Put Your Head On My Shoulder သီချင်းက ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေး၊ ငြိမ်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းလေးထွက်လာတယ်။ တော်သေးတယ်။ ဒီသီချင်းကတော့ ခပ်မြန်မြန်လေးပြီးသွားတယ်။ ဘာမှ မခံစားလိုက်မိဘူး။ အမှောင်ထဲမှာ အရိပ်တွေ အမြန်ဖြတ်သန်းသွားသလိုမျိုး လျှပ်တိုက်ဖြတ်ကျော်သွားတာနဲ့ဆင်တယ်။
ပြတင်းပေါက်ကလည်း အသေကောင်လို ငြိမ်သက်နေတယ်။ လေထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်မရှိဘူး။ အသက်ရှူပေမယ့် အသက်မပါဘူး။ အသက်ကို သေအောင်ရှူလည်း အသက်ရှူမဝဘူး။ အသက်ရှူမဝဘူးဆိုတာကို သိသိသာသာသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ Astrud Gilberto နဲ့ Stan Getz တို့ရဲ့ The Girl From Ipanema သီချင်းသံထွက်လာတယ်။ Rio ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားထဲမှာတော့ အသံမကောင်းတဲ့ ငှက်မလေးတစ်ကောင်က ဒီသီချင်းကို ဟာသလုပ်ပြီးဆိုသွားတယ်။ ဟာသလုပ်လိုက်ရင် ရယ်ရတာပေါ့။ ရယ်ရရင် မငိုရတော့ဘူး။ မငိုရဖို့ကိုပဲ ဟာသလုပ်ပစ်နေရင်းနဲ့ ဟာသမမြောက်ပဲ ငိုချင်းမြောက်ကုန်တာလည်းရှိသဗျ။
Chet Baker ရဲ့ Every Time We Say Goodbye ကို ပြန်ကြားလိုိက်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အချိန်တွေ အကုန်မြန်လိုက်တာ။ အချိန်တွေအကုန်မြန်လိုက်တာ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဟာ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းကုန်သွားတာပဲ။ အစစ်အမှန်လို့ထင်ရတဲ့ ထင်ယောင်မှားတွေ၊ တံလျှပ်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ရေတွေ၊ တိမ်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ရောင်စဉ်လွဲတွေ၊ နှင်းယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ဖော့မှုန်တွေ၊ ချစ်ခြင်းယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အူကြောင်ကြောင်တရားတွေ၊ ဝေးဝေးကနေချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လေသံဖျော့ဖျော့လေးတစ်ခုရယ်၊ အားရင် သတိရလိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ကြေးနန်းတစ်စောင်ရယ်၊ လေထဲကလာပြီး လေထဲမှာပျောက်သွားတဲ့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရယ်၊ သွေးကြောင်တတ်တဲ့ တွဲလက်များရယ်၊ နောက်ပြီး ........သတိရလို့ရေးလိုက်တဲ့စာရှည်တစ်စောင်ရယ်။ သံစဉ်ထဲကနေ ကျွန်တော်ရရှိတယ်။ ပုလင်းတွေများများသယ်သွားပါလား။ လွမ်းတဲ့အခါမျှောပေါ့။ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ၊ အားပေးလိုက်မိသေးတယ်။ အသံမထွက်ပဲ ရယ်ရင်းပေါ့။
ပင့်ကူတစ်ကောင်ကတော့ သူ့ရှိတာလေးနဲ့ အိမ်ဖွဲ့နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ပြတင်းပေါက်တံခါးရဲ့ ယာယီ ပွင့်မြဲအခြေအနေလေးကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ယာယီခိုင်ခန့်တဲ့ အိမ်လေးတစ်အိမ်၊ ယာယီလုံခြုံတဲ့စိတ်၊ယာယီနွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုနဲ့တူတဲ့အိမ်မှာ ယာယီခိုလှုံရင်း၊ ယာယီအိမ်လေးပျက်မှာစိုးတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ အိမ်ဖွဲ့နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကိုတွေးနေတုန်း Etta James ရဲ့ Misty blue တေးသံ ပျံ့လွင့်လာတယ်။ လွမ်းဆွတ်ခြင်းကို အိမ်ဖွဲ့နေတဲ့ ပင့်ကူတစ်ကောင်ကရော ဘာလိုစိတ်အခြေအနေရှိနေမှာလဲ။ အပြာရောင်နှင်းမြူတွေနဲ့ရက်လုပ်တဲ့အိမ်မှာ ... ပင့်ကူတစ်ကောင် ကူးခတ်နေတယ်။
ပြတင်းပေါက်နဲ့နံရံဟာ တစ်ဖျစ်ဖျစ်မြည်ရင်းဆက်စပ်သွားနေတယ်။ တစ်ချိန်မှာ ပြတင်းပေါက်နဲ့တူတဲ့နံရံဖြစ်သွားမလား၊ နံရံနဲ့တေ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်ဖြစ်သွားမလားတော့ မသိနိုင်သေးဘူး။ Simon and Garfunkel တို့ရဲ့ Bridge Over Troubled Water သီချင်းလေးကြားလိုက်ရတယ်။ When tears are in your eyes I will dry them all . ဘယ်ဖက်မျက်လုံးက မျက်ရည်တွေဆက်တိုက် စီးကျလာတယ်။ သောက်ဂွပဲ။
နောက်တစ်ခါ ပြတင်းပေါက်ပါတဲ့ ခေါင်းတလားထဲ ထည့်ပြီး သဂြိုဟ်မယ်ဆိုရင် ... ဒီစီဒီချပ်ကို ထည့်မပေးလိုက်ပါနဲ့လို့ ခင်ဗျားကိုပဲ မှာလိုက်ချင်တယ်ဗျာ။ ။